About Ukraine - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Ukraine waa dal ee Bariga Yurub. Ukraine xuduud Belarus in waqooyi-galbeed , Federation Ruush in bari iyo waqooyi-bari, Poland, Slovakia iyo Hungary galbeed, Romania iyo Moldova in koonfur-galbeed ee. The South of Ukraine laga maydho by Badda Madow iyo Badda ee Azov.
Territory of Ukraine waa 603,628 km², taas oo ah dalka ugu weyn qaaradda Yurub. Dhibcood ee ugu sareeya ee Ukraine waa Mt. Hoverla in Carpathians ah, la qaadis ah 2061 m (ku saabsan 6762 ft).
On August 24, 1991 Baarlamaanka Ukraine ansixiyay Xeerka of Independence, taas oo baarlamaanka ku dhawaaqay Ukraine sida ku gobolka madax banaan oo dimuqraadi ah. Ukraine waa dawlad dhexe oo ka kooban 24 gobollada, hal jamhuuriyad madaxbannaan (Crimea).
Ukraine ay leedahay awood ku ool ah dhaqaalaha. qaybta ugu muhiimsan ee dhaqaalaha waa warshadaha. Waxa la xisaabay in qaybta ugu weyn ee dakhliga qaranka. Beeraha waa muhiim sidoo.
Iskaashiga urur maaliyadeed oo caalami ah, la International Monetary Fund (IMF), bangiyada International iyo Yurub ee dib u dhiska iyo horumarinta (IBRD iyo EBRD) ka caawisaa inay soo bandhigto barnaamijyada ee xasilinta dhaqaale iyo manaafacaad credit mudnaan in dhaqaalaha dalka.
Ukraine ayaa inta badan qoraxda Continental cimilada. Da'itaan waxaa sineyn qaybiyey; waa ugu sareeya ee galbeed iyo xagga woqooyi, iyo ugu hooseeya ee bari iyo koonfur. Western Ukraine agagaarka helo 1,200 milimitir (47.2 in) roobabka sannad kasta, halka Crimea agagaarka helo 400 milimitir (15.7 in). Winters kala duwan qabow oo ay weheliso Black Sea si ay gudaha shishe qabow. heerkulka An qaboobaha celcelis ahaan waa ka -8˚C in -12˚C (ka + 17.6˚F in + 3F). Gobollada Koonfurta heerkulka qaboobaha waa saabsan 0˚C (+320F). heerkulka celcelis ahaan An xagaaga: ka + 18˚C in + 25c (ka + 64.4˚F in + 77˚F) laakiin inta lagu jiro maalintii ka gaari karin + 35˚C (+95F).
total The dadka of Ukraine ayaa lagu qiyaasay 45,426,200 in January 2014. Magaalada ugu weyn ee Ukraine waa Kyiv (magaalada of Ukraine). Ukraine waa ay deggan yihiin wakiillo ka socda 128 quruumaha, jinsiyadaha, iyo qowmiyadaha.
Dawladdu waxay afka Ukraine waa Yukreeniyaan. Ruush, taas oo ahayd afka J. rasmiga ah ee Midowga Soofiyeeti, waxaa si balaadhan looga hadlay, gaar ahaan bariga iyo koonfurta Ukraine. Waxaa jira kooxo qaar ka hadlayay Crimean-Tatar, Romanian, Polish, luqadaha Hungarian oo kale.
diinta: Mu'miniinta ka tirsan diimaha dhowr. Orthodox iyo Greek Catholic (Yukreeniyaan Catholic of Umaad Byzantine) waa ugu weyn.
Hryvna waa lacag qaran ee Ukraine. Waxa uu ahaa lacag qaranka tan iyo September 2, 1996.
Modern dhaqanka Ukraine leedahay wax badan ka wadaagaan dhaqamo Ruush iyo Belarus. Waa arrin la fahmi karo sida dhammaan saddexda quruumaha leeyihiin xididada iyo asal ahaan taariikhi ah ay ka Kievan rus, laakiin inta lagu jiro qarnigii 13aad waxay bilaabeen soo koraya sida quruumaha shaqsi ay haatan yihiin. Taariikhda muujinaysaa in quruun waluba waxay u egtahay in la abuuro halyeeyo iyo sheekooyin ku saabsan ee la soo dhaafay taariikhiga ah. dhacdooyinka Historical waxaa inta badan lagu micneeyey hab dadka doonaya inay iyaga ka aragtid, laakiin in macnaheedu ma aha in tani ay tahay jidka dhacdooyinka dhabta ah ka dhacay.
In ka badan 500 ayaa magaalooyinka dalka Ukraine aasaasay in ka badan 900 sano ka hor, sidoo kale 4,500 tuulooyinkii reer Ukraine ka sii badan yihiin 300 sano jir ah.
In ka badan 150 kun-taxadiri dhaqanka, taariikhda, iyo arkiyoologiga tarjumaya taariikhda cajiib ah oo ka mid ah dadka Ukraine. 80 % oo ka mid ah taxadiri Epoch Kyivan rus (IX – qarniyo XII) yihiin dalka reer Ukraine.
The excavations ah magaalooyinka qadiimiga ah ee Tira, Olvida, Chersonese, Panticapea shukaansi ka B.C qarnigii 5aad. iyo sidoo kale qalcadaha weyn dhisay qarniyadii 14-15-by Talyaaniga ka Genoa, yaalaan Crimea.
In ka badan 600 matxafyada soo bandhigo xaqiiqda ugu fiican iyo shakhsiyaad ka mid ah taariikhda iyo dhaqanka Ukraine.
Ukraine ayaa juqraafiga u fiican oo kala duwan, xaaladaha cimilada, iyo dabeecadda muuqaal dabiici ah. Hawlwadeenada dalxiiska Ukraine ka fiirsan Badda Madow iyo Crimean sida meel fiican ee buuraha, bushkuleeti buurta, fuulitaanka dhagax weyn oo quusidda. Buuraha Carpathian waa meel dhaqanka barafka, buuraha iyo kayaking.
gobollada badan oo Ukraine ayaa badbaadiyey ay asalnimada qowmiyadaha. Sidaa darteed Dalxiiska leeyihiin fursad weyn in ay bartaan dhaqanka qaranka, songs, qoob, iyo cunto.
Last update:22 April 19